I-OBB inikezela iinkonzo zikaloliwe ngaphakathi eOstriya nakwiYurophu iphela. Ngetikiti elifanelekileyo, ungandwendwela konke okuhle iindawo zeholide eYurophu. Ngamacandelo ohlukeneyo amatikiti kunye nokubhaliswa kwekhadi, I-OBB ibeka iimfuno zomntu wonke.
I-OBB yoqeqesho rhoqo eVienna – Graz, eSalzburg – eVienna, Linz – st. Polten, Igrey - iSalzburg. Unokufika nakwilizwe elingabamelwane ngaphakathi kweYurophu usebenzisa oololiwe be-OBB.
Amatikiti e-OBB kaloliwe Ixabiso eliphantsi ngexesha lokuncama, ekuqaleni kweveki, nasemini. Unokuqiniseka ukuba uyifumana amatikiti etreyini ingabizi phakathi evekini. Ngolwesibini, uLwesithathu, nangoLwesine, Amatikiti oololiwe e-OB yeyona nto enoqoqosho. Ngenxa yomthamo wabahambi abahamba ngebhizinisi besiya emsebenzini kusasa nangokuhlwa, amatikiti kaloliwe axabisa ngaphezulu. Kuxabiso eliphantsi kakhulu ukuhamba ngalo lonke ixesha phakathi kokusa kunye nangokuhlwa. Ngeempelaveki lelinye ixesha eliphakamileyo loololiwe, ngakumbi ngolwesiHlanu nangoMgqibelo. Amaxabiso etikiti likaloliwe le-OBB nawo ayonyuka iiholide zikawonke-wonke kunye neeholide zesikolo.
OBB oololiwe Bafunwa kakhulu, kunye nokhuphiswano oluncinci, okwangoku bahlala bengokhetho oluphezulu koololiwe e-Austria. Banako ukuhlawula isithintelo setikiti njengale banayo ethintela ukutshintshiselana ngamatikiti okanye ukubuyiselwa kwemali ngaphandle kokuba kuluhlobo lweTikiti lokuthengisa. Nangona kusekho iwebhusayithi apho unokuthengisa khona amatikiti akho asebenzisana nabantu, I-OBB ayivumeli intengiso yetikiti lesandla sesibini. Kukunceda njani oku ukugcina imali? Yenza i-tiketi yakho kuphela xa uqinisekile ngeshedyuli yakho ingakusindisa ekubhukeni itikiti elinye kabini kuba into ethile iza kwaye awungekhe usebenzise itikiti lasekuqaleni.
1) Fika kwiZiko leSixeko. Le yeyona nzuzo yoololiwe be-OBB xa kuthelekiswa neenqwelomoya. Iiloliwe ze-OBB kunye nolunye uhambo lololiwe ukusuka naphi na kwisixeko ukuya kumbindi wesixeko esilandelayo. Iyakongela ixesha kunye neendleko zekhithi ukusuka kwisikhululo seenqwelomoya ukuya kumbindi wesixeko. Ngokuma kwezitimela, Kulula ukuba ufike naphi na kwisixeko oya kuso. Ayinamsebenzi ukuba usuka phi, eMunich, eSalzburg, Linz, okanye iCologne, indawo yokumisa iziko sisixeko esona sibonelelo iluncedo olukhulu koololiwe be-OBB!
Amatikiti e-OBB Komfort ahlala enetikiti le-OBB, kwaye zilungiselelwe Unxibelelwano ngesitimela ebusuku. Itikiti le-OBB Komfort ligubungela iindleko zohambo, ubhukisho lodidi lokuhamba olukhethiweyo, kunye nesidlo sakusasa kwigumbi lokulala.
Yabemi basekhaya, zimbini iintlobo zobhaliso, ikhadi leVorteils ikhadi kunye ne-Osterreichcard. Kwamazwe aphesheya sicebisa ukuba uthenge ixesha elide kwangaphambili kwaye emva koko uya kuboniswa ngeyona ndlela inexabiso eliphantsi.
Abakhweli banokuthenga iOsterreichcard Classic. Ngeklasikhi ye-Osterreichcard, baya kufumana isaphulelo 100% kwiindleko zokubhukisha izihlalo kwiklasi yoku-1 neyesi-2. Ngeklasi yesi-2 ye-Osterreichcard, ufumana a 50% Isaphulelo sokutshintsha kweklasi ukusuka kwiklasi yesibini ukuya kweyoku-1 kunye nohlobo oluqhelekileyo lwetikiti elinye.
Isikhululo sikaloliwe esiphambili (Isitishi esiPhakathi seSalzburg) ifumaneka embindini wedolophu yesibini eOstriya – eSalzburg.
Iibhayisikile zivunyelwe koololiwe be-OBB okoko nje uthenga itikiti labo kwisikhululo. Baxabisa i- € 2 ngebhayisekile.
wena unako boKulungile a ndiyazie ngaphambili ekhaya OBB oololiwe be 3 kowethu. wena ngeke fumana eyakho isitulo emva kokwenza ugcino.
Ewe. Unokonwaba Intlawulo ye-Intanethi ye-WiFi yasimahla kuzo zonke izitimela ze-OBB nazo zonke iiklasi zokuhamba xa uthenga amatikiti e-OBB (Ngokukhethekileyo kwiSaveATrain.com).